“မိသားစုဝမ်းရေးအတွက် ခက်ခဲနေတဲ့ သူတွေဆီ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကာ လိုအပ်တဲ့စားသောက်ကုန်တွေကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး” - Cele Connections
“မိသားစုဝမ်းရေးအတွက် ခက်ခဲနေတဲ့ သူတွေဆီ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကာ လိုအပ်တဲ့စားသောက်ကုန်တွေကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး”
အရုပ်မလေးတစ်ရုပ်လို လှပတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းဆုရတီစိုးကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ နန်းဆုကတော့ သရုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး သီချင်းဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း တော်တဲ့ အဆိုတော် မင်းသမီးတစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီနေ့ ဧပြီလ (၅)ရက်နေ့မှာတော့ နန်းဆုက ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စီးပွားရေးတွေ ရပ်နားလို့ ခက်ခဲသွားတဲ့ နွမ်းပါးပြည်သူတွေအတွက် သူမကိုယ်တိုင် သွားလှူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ “Covid-19 ရောဂါဘေးကြောင့် Stay At Home ဆိုတဲ့ အခြေအနေမှာ မိသားစုဝမ်းရေးအတွက် ပူပန်နေရတဲ့ လက်တွေ့ဘဝထဲက အခြေခံဘဝတွေများစွာအတွက် Clean Yangon နဲ့တူတူ ဆန်,ဆီ,ဆား,ငါးသေတ္တာ,ပဲနှင့် ဆပ်ပြာဆီများ ကို ကိုယ်တတ်အားသလောက်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်..။ ဒီလို နိုင်ငံနဲ့ချီပြီး အခက်အခဲကြုံတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေမှာ မေတ္တာတရားကိုလက်ကိုင်ထားပြီး တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ်စွမ်းရှိသလောက် အချင်းချင်းလှူဒါန်းကူညီပေးကြဖို့ ဒီကနေ တိုက်တွန်းပါတယ်နော်..။ Clean Yangon Page ကနေတစ်ဆင့်Stay At Home နေရင်းနဲ့လည်း လှူဒါန်းလို့ရတယ်. နန်းဆုကတော့ အားလုံးကို information ပေးချင်တဲ့စိတ်ရယ်၊
ဒီအခြေအနေမှာ ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲ သူများအကျိုးအတွက် ကြိုးစားနေကြတဲ့ ပရဟိတသမားတွေကို လေးစားလို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ချင်တဲ့စိတ်ရယ၊်နန်းဆုကိုယ်တိုင်လာရောက်လှူဒါန်းလို့ စိုးရိမ်ပူပန်မှု ဘဝအမောတွေ ခဏတာလေးဖြစ်ဖြစ် ပြေပျောက်သွားစေချင်တဲ့စိတ်ရယ်ကြောင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ နွမ်းပါးပြည်သူဖေးမကူ..CleanYangon ..Covid19”ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။ ကိုယ်တိုင်သွားလှူကာ ပရိသတ်တွေလည်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ လှူဒါန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း တိုက်တွန်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း နန်းဆုရတီလေးရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ အလှူလေးအတွက် သာဓုခေါ်ပေးသွားကြပါဦးနော်..။
“မိသားစုဝမျးရေးအတှကျ ခကျခဲနတေဲ့ သူတှဆေီ ကိုယျတိုငျသှားရောကျကာ လိုအပျတဲ့စားသောကျကုနျတှကေို လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ နနျးဆုရတီစိုး”
အရုပျမလေးတဈရုပျလို လှပတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး နနျးဆုရတီစိုးကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြနဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိထားတဲ့ နနျးဆုကတော့ သရုပျဆောငျတဲ့ နရောမှာလညျး ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျပွီး သီခငျြးဆိုတဲ့ နရောမှာလညျး တျောတဲ့ အဆိုတျော မငျးသမီးတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ..။
ဒီနေ့ ဧပွီလ (၅)ရကျနမှေ့ာတော့ နနျးဆုက ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ စီးပှားရေးတှေ ရပျနားလို့ ခကျခဲသှားတဲ့ နှမျးပါးပွညျသူတှအေတှကျ သူမကိုယျတိုငျ သှားလှူဖွဈခဲ့တဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ “Covid-19 ရောဂါဘေးကွောငျ့ Stay At Home ဆိုတဲ့ အခွအေနမှော မိသားစုဝမျးရေးအတှကျ ပူပနျနရေတဲ့ လကျတှဘေ့ဝထဲက အခွခေံဘဝတှမြေားစှာအတှကျ Clean Yangon နဲ့တူတူ ဆနျ,ဆီ,ဆား,ငါးသတ်ေတာ,ပဲနှငျ့ ဆပျပွာဆီမြား ကို ကိုယျတတျအားသလောကျသှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ..။ ဒီလို နိုငျငံနဲ့ခြီပွီး အခကျအခဲကွုံတှရေ့တဲ့ အခွအေနမှော မတ်ေတာတရားကိုလကျကိုငျထားပွီး တတျနိုငျသမြှ ကိုယျစှမျးရှိသလောကျ အခငျြးခငျြးလှူဒါနျးကူညီပေးကွဖို့ ဒီကနေ တိုကျတှနျးပါတယျနျော..။ Clean Yangon Page ကနတေဈဆငျ့Stay At Home နရေငျးနဲ့လညျး လှူဒါနျးလို့ရတယျ. နနျးဆုကတော့ အားလုံးကို information ပေးခငျြတဲ့စိတျရယျ၊
ဒီအခွအေနမှော ကိုယျကြိုးအတှကျမဟုတျဘဲ သူမြားအကြိုးအတှကျ ကွိုးစားနကွေတဲ့ ပရဟိတသမားတှကေို လေးစားလို့ ပူးပေါငျးပါဝငျခငျြတဲ့စိတျရယ၊ျနနျးဆုကိုယျတိုငျလာရောကျလှူဒါနျးလို့ စိုးရိမျပူပနျမှု ဘဝအမောတှေ ခဏတာလေးဖွဈဖွဈ ပွပြေောကျသှားစခေငျြတဲ့စိတျရယျကွောငျ့ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ သှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျရှငျ့။ နှမျးပါးပွညျသူဖေးမကူ..CleanYangon ..Covid19”ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။ ကိုယျတိုငျသှားလှူကာ ပရိသတျတှလေညျး ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ လှူဒါနျးနိုငျဖို့အတှကျကိုလညျး တိုကျတှနျးလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး နနျးဆုရတီလေးရဲ့ မှနျမွတျတဲ့စိတျနဲ့ အလှူလေးအတှကျ သာဓုချေါပေးသှားကွ ပါဦးနျော..။
အိမ်မှာပျင်းနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေဆိုပြီပြီး စကားတွေပြောခဲ့တဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်
အနှေးယာဉ်လုပ်သားတွေကို လှူဒါန်းဖို့ ကျော်ထူးဆီက ဆန်အိတ်တွေနဲ့ လူရွှင်တော်ဧရာဆီက ထီလက်မှတ်တွေ ဝယ်ယူအားပေးခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
ထက်ထက်မိုးဦး ရုတ်တရက် ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ သတင်းအပေါ် ဖြေရှင်းလာတဲ့ ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုး
သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ပုံရိပ်ကို အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတံဆိပ်တွေမျိုးစုံနဲ့ ပရိသတ်အထင်အမြင်လွဲအောင် ပြုလုပ်ခံနေရတဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ